Kutholwe Amaphutha Kufayela
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Kutholwe amaphutha kufayela elithi xxxx.pst…
Imininingwane eningiliziwe mayelana "Namaphutha Atholakele Kwifayela" Iphutha
Lapho uvula ifayela le-Outlook PST elonakele noma elonakele nge-Microsoft Outlook, ubona umyalezo wephutha olandelayo:
Kutholwe amaphutha kufayela elithi xxxx.pst. Yeka i-Outlook nazo zonke izinhlelo zokusebenza ezinikwe amandla ngeposi, bese usebenzisa ithuluzi lokulungisa i-Inbox (Scanpst.exe) ukuxilonga nokulungisa amaphutha efayeleni. Ukuthola eminye imininingwane ngethuluzi lokulungisa i-Inbox, bheka Usizo.
lapho 'i-xxxx.pst' igama lefayela le-Outlook PST elizovulwa.
Ngezansi isithombe-skrini sesampula somlayezo wephutha:
Ifayela le-PST lakhiwe izingxenye ezimbili, unhlokweni wefayela, nengxenye yedatha elandelayo. Unhlokweni wefayela uqukethe i-most imininingwane ebalulekile ngefayela lonke, njengesiginesha yefayela, usayizi wefayela, ukuhambisana, njll.
Lapho iMicrosoft Outlook izama ukuvula ifayili, izofunda ingxenye yokuqala yekhanda bese iqinisekisa imininingwane yayo, isibonelo, isiginesha yefayela kanye nemininingwane yokuhambisana. Uma ukuqinisekiswa kwehluleka, kuzobika ifayili le- "Ifayela le-xxxx.pst aliyona ifayili lomuntu siqu." iphutha. Ngaphandle kwalokho, izoqhubeka nokufunda ingxenye yedatha esele futhi uma kukhona amaphutha kuleyo ngxenye, izobika iphutha elishiwo ngenhla, bese iphakamisa ukuthi usebenzise Ithuluzi lokulungisa ibhokisi lokungenayo (Scanpst.exe) ukulungisa.
Kepha nge-most amacala, i-scanpst Awukwazi ukulungisa iphutha, futhi udinga ukusebenzisa umkhiqizo wethu DataNumen Outlook Repair ukulungisa ifayela le-PST elonakele nokuxazulula inkinga.
Ungabona futhi leli phutha lapho usebenzisa i-Outlook 2002 noma izinhlobo eziphansi futhi ifayela le-PST lifinyelela noma lidlula ifayela le- 2GB umkhawulo wosayizi wefayela. Uma kunjalo, kuphela DataNumen Outlook Repair kungakusiza.
Isampula ifayela le-PST elonakele elizodala iphutha. I-Outlook_2.pst
Ifayela elitholwe ngu- DataNumen Outlook Repair: I-Outlook_2_fixed.pst
"Ifayela le-xxxx.pst akulona elamafayela akho." iphutha.